Waxaa jira jirraba kuwan naga mid ah ee ku jira warshadaha suuq geynta si loo yareeyo suuq geynta dibada. Xitaa waan aqriyay halka qaar ka mid ah suuqleyda gudaha ay ku yiraahdeen looma baahna mar dambe suuq geynta dibadda. Run ahaantii, taasi waa qashin. Waa talo aad u xun ganacsi kasta oo raadinaya inuu ku fido suuqyo cusub kuna xirnaado rajada ay ogyihiin inay ka dhigi doonto macaamiil aad u wanaagsan. Haddii aad leedahay summad caan ah (sida in badan oo ka mid ah qorayaasha internetka iyo hay'adaha warbaahinta bulshada ay sameeyaan), ma dhici karto